Uyisebenzisa kanjani iphedi yamaqhosha ukubeka umnxeba kwi-iPhone yakho 7
Enye yezinto ezilula ezenziwa yi-iPhone yakho kukufowunela umntu, yiyo loo nto ifowuni Inxalenye. Ukufowunela umnxeba ngekhiphedi sisakhono sokuqala esibonakalayo kuwe, kwaye kulula ukufa.
ICarPlay luphawu olubonelela ngesakhono sokunxibelelana nemoto yakho kunye nendawo yokufowuna usebenzisa imiyalelo yelizwi likaSiri kunye ne-iPhone yakho. Ii -apps ezenzelwe iCarPlay zikuvumela ukuba unxibelelane nolawulo ngelixa uthintela ukuthatha ingqalelo yakho endleleni. Ndwendwela iwebhusayithi ka-Apple ukubona ukuba ngabaphi na abavelisi abazisebenzisayo ngoku abasebenzisa iCarPlay kwiimveliso zabo.
Ukucofa umnxeba ngesandla, landela la manyathelo:
Nasiphi na isikrini sasekhaya, cofa ifowuni kwiDock, kwaye usetyenziso luvule; cofa iqhosha lokutshixa ezantsi kwesikrini, kwaye iphedi yamaqhosha iyavela.
Ukuba kukho enye into ngaphandle kwekhiphedi, unokucofa nje iqhosha lesitshixo ezantsi kwesikrini ukubonisa iphedi yamaqhosha.
Faka inombolo ofuna ukuyitsalela umnxeba ngokucofa amaqhosha amanani; njengokuba usenza, inani livela ngaphezu kwephedi yamaqhosha.
Xa ufaka inombolo yefowuni, ngaphambi kokuba ubeke umnxeba, ungacofa ukongeza ku Abafownelwa (uphawu + ngasekhohlo kwinombolo yefowuni) ukongeza umntu kwi-app yoQhakamshelwano. Unokwenza umfowunelwa omtsha okanye ukongeza inombolo yefowuni kulowo sele ukhona usebenzisa le nto.
Ukuba ufaka inombolo ngokungachanekanga, sebenzisa iqhosha lokuCima elivela kwiqhosha emva kokuba uqalise ukufaka inani (utolo olukhomba ngasemva nge-X kulo) ukucoca amanani elinye ngexesha.
Cinezela iqhosha lokufowuna elifakwe njenge-headset yefowuni Umnxeba ubekwa kwaye izixhobo ziyavela.
Ukuba ukufowuna okufuna ukuba ubethe ngenani okanye iisimboli (ezinjengophawu lweponti), cofa iqhosha lekhiphedi kwizixhobo ezivela ngexesha lokufowuna ukubonisa iphedi yamaqhosha.
umva womqala wam umthubi
ufunda njani utyikityo lwexesha
Uluhlu lweepilisi zolawulo lokuzalwa olunedosi ephantsi
I-terbinafine 250 mg ithebhulethi
uyahamba nomsebenzi wasimahla